QOF KASTA HA KU RIIXIYO CIYAARAHA CIYAARAHA
Ciyaaraha Ciyaaraha Ugu Fiican 2020& 2021 loogu talagalay Ciyaartoyda Dunida
Kulan Ciyaaraha Ciyaaraha
Himilada kulanka waa in lagu qanciyo macaamiisheenna adduunka iyo ciyaartoydeena oo leh saxa sare oo tayo leh oo lagu kalsoonaan karo si loo hubiyo in macaamil kasta iyo ciyaartoyba ay ku raaxeysan karaan kuna kalsoon yihiin aagagga ciyaaraha ee codsiyadooda. Mashiinka ciyaarta iyo kumbuyuutarka kulanka, ama aaladaha kale ee ciyaaraha ayaa si ballaaran uga helay codsiyadooda suuqa sababo la xiriira sifooyinkooda wanaagsan. Waxay leeyihiin astaamo badan oo damaanad qaadaya baahinta iyo adeegsiga.
Shayga No. Mt-R600Nooca: ShirkaMidabka: qalin qalin, dahab u kacda, cawlanHelitaanka: kaydkaIEAN: 69703444441776Sharraxaadda: jiirka bilaa-galka ah
Xarig xargaha leh ee 'The Cord forpical USB'
Shayga no .: Mt-r545Nooca: ShirkaMidab: casaan, buluug, cadaan, caddaan, madowHelitaanka: kaydkaIEAN: 69703444731844Sharraxaadda: Jiidashada Xafiiska Meel La'aan
2.4g keyboard-ka wireless iyo mouse combo mini4000
Shayga maya .: Mt-Mini4000Nooca: ShirkaMidab: madow, caddaanHelitaanka: kaydkaIEN: Madoow: 69703444731417 White: 697034444777Sharraxaadda: jiirka kombiyuutarka ee xafiiska kumbuyuutarka ee xafiiska iyo combo keyboard
Dib-u-soo-celinta dib-u-dhigga RGB LED GAMING MOUSE PAD PONE PAD POUR PAD POUR PAD POUS POUR PAD POUS P010
Shayga maya .: Mt-P010Nooca: ShirkaMidab: madowHelitaanka: kaydkaEan: 69703444441509Sharraxaadda: 16.8 milyan oo midabka rgb rgl rgl rchit suufka jiirka.
KU SAABSAN Kulan
Shenzhen Kulan Tech Co. Ltd.
Tan iyo markii la aasaasay, "Dhiirrigelinta soo saarista cilmiga sayniska iyo tikniyoolajiyadda, sii xoojinta hal-abuurnimada adeegga sayniska iyo tikniyoolajiyadda" waxay ahaayeen falsafad ganacsi ee Kulan. Naqshad taxane ah naqshadeynta qalabka ciyaarta& fikradaha gaarka ah& ciyaar pc oo tayo sare leh iyo qalabka kombiyuutarka& qalabka ayaa si guul leh loogu suuq geeyay falsafadaas.
Awoodda shirkadda ee agabka ugu wanaagsan ee ciyaarta: Lahaanshaha in ka badan 200 oo shaqaale ah; Aagga warshad ka badan 10000㎡; Lix khadadka isku dhafka wax soo saarka oo buuxa; In ka badan 10 mashiinada wax taaj oo kale oo cirbad buuxda leh; Qalabka kombiyuutarka iyo qalabka kombuyuutarka ee bil kasta soo saaraan wax ka badan 800,000 nooc. Waxaan ka gudubnaa oo aan si adag u hirgelinnaa nidaamka shahaadaynta tayada caalamiga ah ee ISO 9001: 2008. Dhammaan alaabada kulanku waxay ka gudbaan shahaadada caalamiga ah CE, FCC, RoHS, iyo REACH, iwm.
Sababtoo ah sumcadda wanaagsan, tayada kaamil ah iyo naqshad heer sare ah, alaab joogto ah oo alaab ah ayaa laga dhoofiyaa KULANKA dalalka iyo gobollada kale ee adduunka; sidoo kale waxaan samaynay xiriir wanaagsan oo iskaashi oo lala yeesho shirkadaha IT-ga ee caanka ah ee ka dhexeeya dalka iyo dibeddaba.